Farrin ku socota Xildhibannada Barlamaanka 11-aad ee JFS | KEYDMEDIA ENGLISH
Farrin ku socota Xildhibannada Barlamaanka 11-aad ee JFS
Doorashada ma ahan in Xildhibanka doorto Musharraxa laalush siiya, mid ay isku reer ama saaxib yihiin, ama aqoon shakhsiyadeed ka dhexeyso, haseyeeshe waa doorashada Musharrax ku habbon gudashada Xilka Madaxweynaha.
Soomaaliya waxaa ka lumay 5 sano oo qiimo badan ugu fadhiyay xagga dib u heshiisinta iyo dhammeystirka dhismaha dowladda Soomaaliya. Musharraxnimada iyo codsiga dib u doorashada Madaxweyne Farmajo oo dalka Soomaaliya bohol ku riday waa damqasho la’aan iyo meel ka dhac, xushmadarro, iyo xaqiraad loo geystay garashada, karaamada, iyo ixtiraamka shacabka Soomaaliyeed.
4 sano ee socota waxay laga dhaxli doona baaba’a dowladda Soomaaliya ama dhismaha dowlad hanata maamulka dalka, gaaridda yoolkaas waa xujo aad u adag in la tiigsado haddii dadaalka, daacadnimada, kartida, iyo hal abuurka Xildhibannada Barlamaanka Federaalka 11 noqon mid loo aayo oo aan horey u soo marin taarikhda Ummadda Soomaaliyeed.
14ka Abrile 2022, adinkoo ah Xildhibannada matalaya dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxaad ku dhaarateen magaca Ilaahey inaad ilaalineysaan danta dalka, dadka, iyo diinta Ummadda Soomaaliyeed, taaso aakhiro iyo adduunyaba la idin kula xisaabtamayo.
Dad badan waxay aaminsanaayeen in habka la idin ku soo doortay uu idin kuu dhirrin galinayo, idin ku qancinayo in musuqmaasuqa, beenta, khiyaanada ay ka fiicaan yihiin runta, daacadnimada, gobannimada, iyo xalaasha la qorsheeyay in la idin ku soo doorto.
Haseyeeshe waxaad abuurteen rajo qalbiga shacabka Soomaaliyeed ka farxisay kaddib markii aad doorateen hoggaan cusub, kuwaaso aad siiseen fursad ay ku muujin karaan isbeddel dadka iyo dalka Soomaaliya u horseeda dib u heshiisiin, nabad, iyo dhismaha dowlad tayo leh oo hanata maamulka dalka.
15ka Maajo 2022 waxaad kala dooran doontaan musharrixiin u tartameysa xilka Madaxweynaha JFS, kuwaaso aad u kala duwan, waxaana ku jira kuwo ay xaaran aheyd inay idin horyimadaan haddii ay tixgelinayaan xadgudubyada ay galeen iyo dareenka xun ee shacabka Soomaaliyeed ka qabo. Kuwaas waxay aaminsan yihiin in laalush ay siiyaan Xildhibannada qaarkood ay ku guuleysan karaan xilka Madaxweynaha, taaso halis ku ah Xildhibannada, dowladnimada, iyo shacabka Soomaaliyeed.
Waxaa kaloo Musharrixiinta ka mid ah kuwa aan aqoon, xog ogaalnimo, iyo waayo aragnimo u laheyn baaxadda mushkiladaha dalka Soomaaliya ku gadaaman iyo shaqada dowladda. Waxaa ku jira musharrixin aqoon, karti, xog ogaalnimo fiican leh xilka Madaxweynaha iyo shaqada dowladda, hase yeeshe aan haysan dhaqaale ay ku bixiyaan laalush.
Xildhibaan kasta waa mas’uul laga rabo inuu ogaado, qiimeeyo, xaaladda dalka marayo iyo wax qabadka loo baahan yahay, kaddibna dadka, dalka, iyo diinta u doorto Musharraxa uu aaminsan yahay inuu ku habboon yahay xallinta mashaakilaadka taagan iyo guud ahaan gudashada xilka Madaxweynaha oo ah geed fadhiga hay’adaha dowladda federaalka heer federal iyo mid dowlad goboleed.
5 sano Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay ku jirtay tiih aan wax shaqo ah ka socon. Waxaa laga joojiyay kaalmadii dibedda, waxaana dhici karta in 17ka Maajo kaddib ay baaba’aan dhammaan wixii dadaal ahaa ee la soo bilaabay 2012, taaso ah khasaare iyo dib u dhac aad u weyn oo keeni kara in bixin waayo gunnooyinka Xildhibannada, mushaarka Ciidammada iyo shaqaalaha, iskadaa mashaaric shaqo abuur.
Xildhibannada waa inaad xusuusnaataan in dhammaan 80% wax qabadka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada intooda badan sida waxbarashada lacagta la’aanta ah, gargaarka caafimaadka sida Covid-19, gargaarka barakayaasha, dhaawacyada dibedda loo qaadayo, mushaaraadka Ciidammada, shaqaalaha, iyo Maamullada dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabelle, Koofur Galbed, iyo Gobolka Benadir, iyo dhammaan mashaariicda dalka ka socota waxaa bixiya dalal ajnabi ah.
Si aad u ogaataan heerka ba’aan ee musuqmaasuqa marayo waxaad akhrisataan ama codsataan in la idiin akhriyo warbixinnada Hantidhawraha guud sannadaha 2018, 2019, 2020, iyo 2021, iyo warbixinta guddiga maamulka Maaliyadda ( Financial Governance Committee), iyo warbixinnada qiimeynta Ciidammada federaalka Soomaaliya oo keentay in 4 sano kale Ciidammada AMISOM dalka sii joogaan si nabadda iyo dib u dhiska dowladda loo taakuleeyo.
Sidaa darted, waxaan Xildhibannada sharafta leh ee Barlamaanka Federaalka 11 ugu baaqaya, kana codsanaya inay doortaan Musharrax Madaxweyne ee hogaamin kara ka samabixinta dalka xaaladda murugsan ee uu hadda ku jiro, isla markaana ku hoggaamin kara waddada dimoqradiga ah ee dastuurka ku qoran, kana shaqeeya degdeg u fulinta arrimaha hortobyada leh ( priorities) ee la rabay in la qabto 2017-2022 kuwaaso baaqday, iyo kuwa ku qorsheysay 2022-2026.
Waa mas’uuliyad culus ee Ilaahey ha idin ku garab galo. Aamin.
Dr. Maxamud M. Culusow - KEYDMEDIA ONLINE